राजीनामा दिने कार्य - Law & More B.V. | आइन्डहोभन र एम्स्टर्डम
सम्बन्धविच्छेद मा धेरै समावेश छ
सम्बन्ध विच्छेद कार्यवाही धेरै चरणहरू समावेश गर्दछ। कुन कदमहरू चाल्नु पर्ने हुन्छ तपाईको बच्चा छ वा छैन र तपाई भविष्यको भूतपूर्व पार्टनरसँग सम्झौतामा अग्रिम रूपमा सहमत हुनुभएको छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ। सामान्यतया, निम्न मानक प्रक्रिया अनुसरण गर्नु पर्छ। सबै भन्दा पहिले, सम्बन्ध विच्छेदको लागि एक अदालत अदालतमा पेश गर्नु पर्छ। यो एकतरफा अनुप्रयोग वा संयुक्त अनुप्रयोग हुन सक्छ। पहिलो विकल्पको साथ, एक पार्टनरले केवल याचिका सबमिट गर्दछ। यदि एक संयुक्त याचिका गरिएको छ भने, तपाईं र तपाईंको पूर्व पार्टनरले निवेदन सबमिट गर्नुहोस् र सबै व्यवस्थाहरूमा सहमति जनाउनुहोस्। तपाईं यी सम्झौताहरू मध्यस्थ वा वकिल द्वारा एक सम्बन्ध विच्छेद करार मा राखिएको हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा त्यहाँ अदालतमा सुनुवाई हुँदैन, तर तपाइँले सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय प्राप्त गर्नुहुनेछ। सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय प्राप्त गरेपछि तपाईं एक वकिल द्वारा खींचिने राजीनामा को एक प्रक्रिया हुन सक्छ। राजीनामाको काम भनेको एक घोषणा हो कि तपाईले अदालतले जारी गरेको सम्बन्धविच्छेदको निर्णयलाई नोट गर्नुभयो र तपाईले त्यो निर्णयको बिरूद्ध अपील गर्नुहुने छैन, यसको मतलब यो तुरून्त नगरपालिकामा दर्ता गर्न सकिन्छ। एक पटक नगरपालिकाको नागरिक स्थिति रेकर्डमा निर्णय आएपछि तपाईंलाई कानून अन्तर्गत मात्र सम्बन्धविच्छेद गरिनेछ। जबसम्म सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय दर्ता गरिएको छैन, तपाईं अझै औपचारिक विवाहित हुनुहुन्छ।
अदालतको निर्णय पछि, months महिनाको अपीलको अवधि सिद्धान्तमा सुरू हुन्छ। यस अवधिको बीचमा तपाईं सम्बन्ध विच्छेदको निर्णयको विरुद्ध अपील गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं यससँग असहमत हुनुभयो भने। यदि पार्टीहरू तत्काल सम्बन्ध विच्छेदको निर्णयसँग सहमत छन् भने, यो अवधि months महिना ढिलाइ हुन सक्छ। यो किनभने अदालतको निर्णय मात्र दर्ता गर्न सकिन्छ मात्र एक पटक निर्णय अन्तिम हुन्छ। एक फैसला मात्र अन्तिम हुन्छ जब--महिना अपील अवधि समाप्त हुन्छ। जे होस्, यदि दुबै पक्षले राजीनामा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, तिनीहरू दुबै अपील गर्न अस्वीकार गर्छन्। दलहरूले अदालतको फैसलालाई 'राजीनामा' गरे। त्यसपछि निर्णय अन्तिम हुन्छ र--महिना अवधि प्रतिक्षा नगरी दर्ता गर्न सकिन्छ। यदि तपाइँ सम्बन्ध विच्छेदको निर्णयसँग सहमत हुनुहुन्न भने, राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर नगर्नु महत्वपूर्ण छ। त्यसैले हस्ताक्षरमा हस्ताक्षर अनिवार्य छैन। अदालतको निर्णय पछि त्यहाँ राजीनामा को क्षेत्र मा निम्न संभावनाहरु छन्:
दुबै पक्षले राजीनामाको कार्यमा हस्ताक्षर गरे:
त्यसो गरेर, पार्टीहरूले संकेत गर्दछ कि उनीहरूले सम्बन्ध विच्छेदको फैसलाको बिरूद्ध अपील गर्न चाहँदैनन्। यस अवस्थामा,-महिनाको अपील अवधि समाप्त हुन्छ र सम्बन्ध विच्छेद कार्यवाही छिटो हुन्छ। नगरपालिकाको नागरिक स्थिति रेकर्डमा सम्बन्धविच्छेद तुरून्त प्रविष्ट गर्न सकिन्छ।
दुई पक्षमध्ये एकले राजीनामाको कार्यमा हस्ताक्षर गर्दछ, अर्कोले स्वीकार गर्दैन। तर ऊ वा उनीले अपील पेश गर्दैन।
अपीलको सम्भावना खुला नै छ। Months महिनाको अपील अवधि कुर्नु पर्छ। यदि तपाईंको (भविष्य) पूर्व पार्टनरले सबै पछि अपील पेश गरेन भने, सम्बन्ध विच्छेदको निश्चित रूपमा the महिना पछि नगरपालिकामा दर्ता गर्न सकिन्छ।
दुई पक्ष मध्ये एकले राजीनामाको कार्यमा हस्ताक्षर गर्दछ, अर्को पार्टीले अपील दर्ता गर्दछ:
यस अवस्थामा कार्यवाही पूर्ण रूपमा नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दछ र अदालतले पुनरावेदन पुनरावेदनमा अपील गर्दछ।
कुनै पनि दलले राजीनामाको कार्यमा हस्ताक्षर गर्दैन, तर दलहरू पनि अपील गर्दैनन्:
-महिनाको अपील अवधिको अन्त्यमा, तपाईं वा तपाईंको वकीलले सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय सिभिल स्टेटस रेकर्डमा अन्तिम दर्ताका लागि जन्म, विवाह र मृत्यु दर्ताकर्तालाई पठाउनु पर्छ।
Divorce-महीनाको अपील अवधि समाप्त भएपछि तलाक डिक्री अपरिवर्तनीय हुन्छ। एक पटक निर्णय अपरिवर्तनीय भएपछि, यसलाई नागरिक स्थिति रेकर्डमा months महिना भित्र प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। यदि सम्बन्धविच्छेदको निर्णय समयमै दर्ता गरिएको छैन भने, निर्णय समाप्त हुन्छ र विवाह विघटन हुनेछैन!
एक पटक अपीलको समय सीमा सकिसकेपछि नगरपालिकामा सम्बन्ध विच्छेद दर्ता गर्नको लागि तपाईलाई गैर-आवेदन पत्रको आवश्यक पर्दछ। तपाईंले गैर-आवेदनको यो कामको लागि अदालतमा आवेदन दिनै पर्छ जसले तलाकको कार्यवाहीमा फैसला सुनायो। यस काममा अदालतले घोषणा गर्‍यो कि पार्टीहरूले फैसलाको बिरूद्ध अपील गरेनन। राजीनामाको कामसँगको भिन्नता यो हो कि अपीलको समयावधि सकिसकेपछि गैर-आवेदनको काम अदालतबाट अनुरोध गरिन्छ, जबकि राजीनामाको काम पक्षको वकिलले अपीलको समयावधि समाप्त हुनु अघि नै निकाल्नु पर्छ।
तपाईको सम्बन्ध विच्छेदको बखत सल्लाह र मार्गदर्शनका लागि तपाईले पारिवारिक कानून वकिलहरूको सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ Law & More। मा Law & More हामी बुझ्छौं कि सम्बन्धविच्छेद र त्यसपछिका घटनाहरूले तपाईंको जीवनमा टाढाका परिणामहरू लिन सक्दछ। त्यसकारण हामी व्यक्तिगत दृष्टिकोण राख्छौं। हाम्रो वकिलहरूले कुनै पनि कार्यवाहीमा तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्दछन्। मा वकिलहरु Law & More पारिवारिक कानूनको क्षेत्रका विज्ञहरू हुन् र सम्भवत तपाईको पार्टनरसँग सम्बन्ध विच्छेद प्रक्रिया मार्फत मार्गदर्शन गर्न पाउँदा खुशी छन्।
अर्को एक रोजगारदाताको रूपमा, के तपाईं बिरामी आफ्नो कर्मचारी रिपोर्ट गर्न अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ? »
पछिल्लो Work कामको इन्कार